I-Casa BellaT2 Stwagen, 500m ukusuka ebhishi - I-Airbnb
I-Casa BellaT2 Stwagen, 500m ukusuka ebhishi
Centre-Ville, Saint-Pierre, i-Réunion
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Nathalie
" Casa Bella" indawo ethokomele T2 amamitha angu-500 ukusuka e-Saint Kaen lagoon nokuzijabulisa kwayo (ama-bar, izindawo zokudlela, i-marina, imakethe, i-disco, i-saifo...)endaweni ethulile nevikelekile enendawo yokupaka.
Itholakala kahle eholidini lasebhishi kodwa futhi itholakala kahle ukuthola iningizimu yesiqhingi (ihora elingu-1 ukusuka entabamlilo, ama-cilaos, umgodi weqhwa, iningizimu yasendle), imizuzu engu-15 ukusuka emabhishi anesihlabathi esimnyama echibini lamanzi anosawoti, imizuzu engu-20 ukusuka e-Saint Gilles)
Ifulethi elihle, elihle futhi elinethezekile elinefenisha yekhwalithi;
Ikamelo lokulala line-air-conditioned futhi lihlotshiswe ngombhede omkhulu ongu-160щ, amashidi antofontofo kakhulu, imihlobiso yesimanje nendawo yokugcina izinto (i-closet enkulu);
Ikhishi linakho konke okudingekayo (umshini wekhofi we-Nespresso, i-toaster, iketela, uhhavini, i-microwave, ifriji, umshini wokugeza izitsha, umshini wokuwasha);
Ikamelo lokuphumula linosofa ontofontofo kakhulu.
Ithala linetafula lokudlela lapho ungathola khona isidlo sasemini nesidlo sakusihlwa alfresco nosofa lapho ungaphumula khona;
Ifulethi litholakala endaweni yokuhlala ephephile esitezi sesibili enekheshi nendawo yokupaka yamahhala;
Eduze kwawo wonke amasevisi , beka amapotimende akho kanye nemoto yakho phansi futhi uhambe yonke i-Saint-Pierre ebhishi, izindawo zokudlela, imakethe, i-disco noma ukuthenga...
Ibhishi likude ngamamitha angu-500, lapho ungabhukuda khona ngokuphephile, uzijwayelanise ne-kite surfing, isidlo sasemini noma iziphuzo ngenkathi ubuka ukushona kwelanga.
Indawo engasemanzini inemidlalo yamanzi nengadi yezingane ukuze izingane zethu ziyijabulele;
Ungaphuthelwa imakethe yangoMgqibelo ekuseni lapho ungathola khona kokubili izikhumbuzo,imikhiqizo kanye nokunambitheka kwesiqhingi sethu;
Ifulethi litholakala ngokuvakashela iningizimu yesiqhingi (imizuzu engu-20 ukusuka emabhishi esihlabathi esimnyama, imizuzu engu-30 ukusuka e-Saint Gilles, ihora elingu-1 ukusuka e-Cilaos, ihora elingu-1 ukusuka entabamlilo, ihora elingu-1 ukusuka eningizimu yasendle nezimpophoma zayo...)
Intela yezivakashi ayifakiwe lapho ubhukha izocelwa esayithini ngesilinganiso esingu-1€ 40/usuku umuntu ngamunye.
Ngitholakala kakhulu ezivakashini zami, unganqikazi ukungibuza;
Jabulela ukuhlala kwakho nami
Ifulethi litholakala enkabeni ye-Saint Kaen namamitha angu-500 ukusuka ebhishi,i-Saint Kaen, idolobha lezivakashi elinendawo yalo yokutshuza noma ukubhukuda livumelekile, ama-strawberries ayo okudla kwasolwandle, izindawo zokudlela, ama-bar, ama-disco, imakethe yangoMgqibelo ekuseni akufanele uphuthelwe, i-marina yayo, imidlalo yamanzi yezingane, ipaki lezingane, i-kite surfing, yonke imisebenzi yayo ehlanganiswe endaweni efanayo;
Kutholakala futhi ukuvakashela iningizimu yesiqhingi esidume ngentabamlilo yaso, umgodi weqhwa, kanye neNingizimu yasendle, etholakala ehoreni elingu-1 ukusuka enkabeni ye-Saint Saint Saint Saint Saint
Ngihlala ngitholakala ukuze ngiphendule noma yimiphi imibuzo ongaba nayo futhi ngingakunikeza imininingwane yohambo ngesikhathi sokuhlala kwakho ngaphandle kwezindleko ezengeziwe
Hlola ezinye izinketho ezise- Centre-Ville namaphethelo